Ngwa kachasị mma iji hie ụra gị ma zuru ike karịa | Esi m mac
Ngwa kachasị mma iji nyochaa ụra gị ma zuru ike nke ọma
José Alfocea | | ọtụtụ
Onye obula anyị kwesịrị ihi ụra na izu ike, na ọ bụ ezie na a tụrụ aro ụra ụra awa asatọ kwa ụbọchị, ọ bụ eziokwu na onye ọ bụla, dabere na ọrụ ha, nwere ike ịchọ obere ụra ụra. Agbanyeghị, n'agbanyeghị awa ole anyị na-ehi ụra kwa ụbọchị, ihe dị ezigbo mkpa bụ izu ike nke ọma n'ihi na ọ nweghị uru ihi ụra ọtụtụ awa ma ọ bụrụ na anyị eteta n'ụra, enweghị ike ọgwụgwụ, na ahụ mgbu, wdg. Mgbe nke a mere anyị, ọ bụghị naanị na anyị ga-eme ihe ka njọ na ọrụ anyị ụbọchị ahụ, anyị ga-anọkwa n'ọnọdụ ọjọọ, mwute, na anyị ga-ezigara ndị gbara anyị gburugburu mmetụta ndị a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ihi ụra nke ọma na izu ike bụ mkpa dị oke mkpa nke a ka na-enyocha taa. Notghara ị drugsụ ọgwụ ike ma ọ bụ mmanya na-aba n'anya, na-ezere ihe ndị na-akpali akpali dị ka kọfị, tii ma ọ bụ ihe ọ asụ energyụ ike, yana ịnọgide na-arụsi ọrụ ike n'ụbọchị, bụ ụfọdụ n'ime igodo ihi ụra ka mma. Ma na-enweghị ihe a niile, ị nweghị ike izu ike ka i kwesiri, ikekwe otu n'ime ndị a ngwa iji nyochaa ụra gị enyere gị aka imeziwanye nke nta nke nta.
3 ++ra ++
4 Pra ụra Pulse 2 Motion
Ọ bụ ezie na anyị nọ na blog nke Apple, anyị ga-amalite na otu n'ime ụdị ndị asọmpi, Xiaomi. Maka ndị chọrọ ileba anya n'ụra ha ma chọpụta ogo izu ike ha n'ejighị ego karịrị akarị, ana m akwado ya ihe Mi Band 2 na-achota mgbaaka na ngwa Mi Fit iPhone.
Maka ọnụahịa nke ihe dị ka euro 25 ma ọ bụ 30, ị ga-enwe ike n'ụzọ zuru ezu soro ụra gị, lelee oge ị na-ehi ụra miri emi na ụra na-ehi ụra kwa abalị, hụ site na oge ị ga-arahụ ụra, ọbụnakwa jiri eserese gosipụta ọganihu ụra gị oge elekere na abalị n'abalị. Nke a ọ ga-enyere gị aka ịhapụ àgwà ọjọọ ka ị hụ na ị na-ehi ụra nke ọma ma zuru ike karịa.
Beddit na ya Nyochaa ụra, nke Apple nwetara n'oge na-adịbeghị anya, bụ ngwaọrụ na ngwa kachasị mma iji nyochaa ụra gị. Companylọ ọrụ a nwere ihe nyocha ụra a na-akpọ Ihe ndina 3 enwere ike ịchọta ya na Apple na ọnụahịa nke euro 149,95.
Dị ka ị pụrụ ịhụ n’ihe oyiyi ahụ, ọ mejupụtara a ebughibu na-agbanwe ihe mmetụta nke etinyere n’agbata mpempe akwụkwọ na akwa ụra, n’okpuru ohiri isi, ma nakọtara data niile metụtara ụra anyị, nyocha ya ma ziga ya na ngwa iPhone ya.
A na-eme nnyocha nke data ndị a site na ụkpụrụ sayensị nke ballistocardiography (BCG), nke na-arụ ọrụ igwe, akpa ume anyị, ngagharị, na ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere Apple Watch, yana ++ra ++ ị gaghị achọ ihe ọ bụla iji nyochaa ụra gị. Dị ka m nwere na ngwaọrụ ndị gara aga, Ihi ụra ++ ga-edekọ oge nke ụra miri emi na ụra ụra na-adabere na mmegharị anyị site na iji accelerometer nke  Watch. Na mgbakwunye, ozugbo ị tetere, ngwa ahụ ga-egosi gị ozi ahụ ma mekọrịta data ahụ na Health ma ọ bụ ngwa ị na-eji site na HealthKit.
Dịka ị nwere ike ibuworị, ọghọm bụ na ị kwesịrị ijide n'aka na ị nwere elekere ebubo batrị, ikwesịrị ịkwụsị itinye ya na oge karịa n'abalị.
Pra ụra Pulse 2 Motion
Nke a bụ ngwa yiri nke gara aga, mana ọnụ ahịa ya bụ € 4,49. Pra ụra Pulse 2 Motion na-eme ka a na-enyocha obi gị site na ihe mmetụta Apple Watch na mmeghari gi n'abali ma nyochaa nsonaazụ ya na-egosi gị nyocha zuru ezu kwa ụtụtụ na ị nwere ike iji chọpụta ma ihe ndị ị merela na-enyere gị aka ihi ụra nke ọma.
Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a bụ ntakịrị ihe atụ nke ngwaọrụ na ngwa ga - enyere anyị aka ịrahụ ụra nke ọma N'ihi nlekota oru nke oge ụra anyị, agbanyeghị, eziokwu bụ na n'agbanyeghị etu ihe dị mma ma mezue ngwa ndị a ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, ha agaghị aba anyị uru ma ọ bụrụ na abalị ọ bụla anyị anaghị ehi ụra matarasị ezigbo àgwà nke na-eme ka anyị zuo ike dịka o kwesiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ngwa kachasị mma iji nyochaa ụra gị ma zuru ike nke ọma
Jimmy Iovine na-enye mkparịta ụka ọhụrụ banyere Apple Music na mpaghara ahụ
Apple weputara ezigbo AirPods na France